बिहान उठ्नेबित्तिकै मोबाइल नहेर्नुस् है ! - NepalKhoj
बिहान उठ्नेबित्तिकै मोबाइल नहेर्नुस् है !
नेपालखोज २०७८ पुष २३ गते ८:३४
काठमाडौं । मोबाइल र टेलिफोन सञ्चार क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण साधन हुन् । मोबाइल फोन त हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा भरपर्दो साथी नै हो । हामी दिनरात, हरेक पल मोबाइलसँगै हुन्छौं ।
फाइदैफाइदा भएको मोबाइल, कुनै बेला यो हाम्रो लागि घातक पनि हुनसक्छ । धेरैजसो मानिस बिहान उठ्नेबित्तिकै मोबाइल हेर्ने गर्छन् । तर बिहान सबेरै फोन हेर्नु राम्रो बानी होइन । बिहान उठ्नेबित्तिकै मोबाइल हेर्न नहुने कारणका सम्बन्धमा चर्चा गरौं ।
बिहान मोबाइल हेरे स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्ने वैज्ञानिकहरू बताउँछन् । बिहान उठ्नेबित्तिकै फोन हेर्दा आँखामा नराम्रो असर पर्छ । जसका कारण बिस्तारै आँखाको ज्योति कम हुन थाल्छ । यस्तै बिहानै मोबाइलको सिसामा आँखा पर्दा मानिसमा क्रोध बढ्ने हुन्छ ।
दिनैभरि सानातिना कुरामा चिढ्चिडापन देखिने हुन्छ । बिहान मोबाइल हेर्दाका अन्य बेफाइदामा दिनभरका सबै काम ढिलो हुने हुन्छ ।
अधिकांश हामी बिहान सबेरै फोन चेक गर्छौं, अनि धेरै समय यसमै बिताउँछौं । यो पटक्कै राम्रो होइन, यसका धेरै बेफाइदाहरू छन् । यस्तै बिहान सबेरै फोन चेक गर्दा मुटुमा पनि नराम्रो असर पर्छ ।
तसर्थ, हामीले बिहान उठ्नेबित्तिकै फोन चेक गर्ने होइन, बिहानका आफ्ना सामान्य काम गरेपछि मात्र फोन जाँच गर्नुपर्छ । यस्तै फोन गर्न जरुरी छ भने उठ्नेबित्तिकै बाहिरी वातावरण हेरेपछि मोबाइल हेर्न उपयुक्त हुने वैज्ञानिकहरू सुझाव दिन्छन् ।